China raglan sleeve pullover yevarume fekitori uye vagadziri | Dufiest
Raglan sleeve pullover yevarume
Iyo track zipper hoodie yakanyanya fashoni uye yakagadzikana kune ese ari maviri imba nekufamba uye inotengeswa nesu kwazvose mutengo. Isu tinoshandisa jira rakasiyana senge donje, acylic, polyester uye Iyi vakadzi hoodie inowanikwa pamutengo wekutengesa. Vatengi vanogona kutenga hoodie yegorosa muhuwandu hwakawanda AT yemakwikwi mutengo AS AS DUFIEST mitambo inogadzira yakasarudzika kubva kuChina, wholesaler, ekisipota uye fekitori yemitambo, hoodies, track majaketi uye pasi, T-shati, Tangi yepamusoro uye akakwana mapfupi kupfeka.
Yedu yakapfava uye inodziya evarume hovhodhi dzekupfeka dzinodziisa yako yakasarudzika, yakasarudzika maitiro. Uine hunyanzvi kana dhizaini yakasarudzika pane ino yakatetepa yakakodzera uye yakasimba donje redonje, ino ichave yako nyowani nyowani zip up hoodie.
Iyo jasi rakapfekedzwa ndeye mhando yakajairika mukugadzirwa kwemitambo yakawanda yemitambo, kuitira kuti igone kuwanda kwevatengi kuti vanzwisise zvirinani kuenderana kwezvigadzirwa zvakadaro. Iri bepa rinotsanangura hunhu hwakafananidzwa hweHooded Coat, izvo zvinoita kuti hunhu hunoshanda hwerudzi urwu rwezvipfeko kuve nepamusoro zviri nani. Pakati pavo, chinonyanya kuzivikanwa idambudziko reheti. Kuti utaridzike zvakanaka uye ugare zvakanaka, zvakakosha kurongedza ngowani. Vanhu vazhinji vanozonzwa kuti ngowani yakanyanya kuwanda, kana iwe uchikwanisa kuishandisa zvizere kana uchienderana, yekupedzisira kunzwa kwekupfeka kunovandudzwa zvakanyanya.
Yepfuura: Ladie yekunze kupfeka zipi hoodie
Zvadaro: cationic machira track jekete zipi hoodie yevakadzi